ပီတိအစ်မဇိပေါရနှင့် Rachael ၏ရူပါရုံ | Apg29
ပီတိအစ်မဇိပေါရနှင့် Rachael ၏ရူပါရုံ
အရာအားလုံးကိုပုံမှန်ဖြစ်သလိုပဲ, အဘယ်သူအားမျှမိန့်တော်မူပါသို့မဟုတ်ပီတိအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့သည်။ လူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကိုနှင့်အတူသာအာရုံစိုသလိုပဲ။ ထို့နောက်ရုတ်တရက်ပီတိရှိ၏။
ငါမေးသော်, ကြှနျုပျတို့အခါသခင်ယေရှုခရစ်နှင့်အခန်းထဲမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်များတို့သည် လာ. မေးလျှင်, အခါ။ မိက္ခေလနှင့်ဂါဗြေလနေစဉ်, သူရောကျသောအခါဘုန်းကြီးကဘုရငျအတှကျလမျးလာခဲ့ပါတယျ။ ယရှေုသညျကအရမ်းဝမ်းနည်းခဲ့တယ်။ သူကဟစျကျွောလေ၏နဲ့နှစ်ရက်အကြာမိုဃ်းကောင်းကင်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာငါ့ကိုပြသခဲ့သည်။
ဘုရားသခင့ထို့နောက်ပြီးခဲ့သည့်တံပိုးမှုတ်ထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်အားအမိန့်ပေး၏။ ကောင်းကင်တမန်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာမြင်သညျယရှေုကိုမှုတ်ရန်အခါ။ သူသည်မတရားသောမေထုန်, အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်, မကောင်းသောကိုမွငျလြှငျ, လူတွေကိုဘုရားသခင်အားမျှအာရုံစိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ယရှေုသညျဤမျှလောက်ကြွေးကြော်လျက်, ခမညျးတျောတစ်ကမ္ဘာလုံးဒါသနားကြင်နာခဲ့ပေမယ့် said:
ငါကတနင်္ဂနွေဖြစ်ပျက်ကိုသိမြင်လျှင်, များပြားလက်ဝဲနောက်ကွယ်မှခဲ့ကြသည်။ သာသင်းအုပ်ဆရာနှင့်သူ၏ဇနီးတက်ဆွဲရာအသင်းတော်၌, သူတို့သာသစ္စာရှိသောအရှိကြ၏။ မိခင်ကိုယ်ဝန်ပျောက်ကွယ်သွား, ဒါပေမဲ့သူတို့ကျန်ရစ်၏။
ထိုအခါငါသူတို့သညျသစ်စာရှိကြ၏, ဒါပေမယ့်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်, သူတို့အပြစ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ထားတဲ့အတွက်လိပ်ရှိခဲ့ပါတယ်ထင်တဲ့သူကခရစ်ယာန်တွေကိုမြင်တော်မူ၏။ ငါသူကြွင်းသောစေအပြစ်များကိုတစ်လိပ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါရှိခဲ့သူတစ်ဦးသင်းအုပ်ဆရာကိုမြင်တော်မူ၏။ သူကကြွေးကြော်မှစတင်ခဲ့:
": သငျတို့သလူသားသည်ကြွလာမထင်မမှတ်သောအချိန်နာရီ၌အတွက်ထို့ကြောင့်လည်းအဆင်သင့်ရှိကြလော့!" မဿဲ 24: 44
"သူ၏ဘဝကမဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ရဖို့ရှာအံ့သောငှါ, ဒါပေမယ့်အကြင်သူသည်မိမိအသက်ကိုရှုံးကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်လောတ hustru.den ကိုသတိရပါ!" Lk.17: 32, 33